China's graphite electrode musika kuongororwa uye musika maonero mamiriro.
Graphite electrode musika ongororo Mutengo: Mukupera kwaChikunguru 2021, iyo graphite electrode musika yapinda pasi nzira, uye mutengo we graphite electrode wakadzikira zvishoma nezvishoma, pamwe nekudzikira kwakazara kweanenge 8.97%. Kunyanya nekuda kwekuwedzera kwehuwandu hwehuwandu hweiyo graphite ...
Ikozvino graphite electrode musika (7.18)
Chinese graphite electrode musika mitengo yakaramba yakagadzikana vhiki ino. Zvinonzwisisika kuti nekuda kwekuderera kuri kuramba kuchiitika mumutengo wepasi-sarufa petroleum coke uye nenyaya yekuti mamwe ekudzikira esimbi mamiro e graphite electrode ane mashoma masheya e graphite electrode, pasi ...
Sezvo mutengo wesimbi uri kuramba uchikwira, mutengo wekufema choto simbi inogadzira icharamba ichikwira, uye mutengo wemubhadharo wemagetsi svutugadzike yesimbi uchishandisa simbi yakasarudzika sezvo mbishi ichiratidzwa. Kukosha kwanhasi: Mutengo we UHP600 muIndia graphite electrode musika ...
Kuongorora kweMusika: Graphite electrode yemusika mitengo yakaramba yakagadzikana svondo rino. Vhiki rino, mutengo wepasi-sarufa petroleum coke, iyo yekumusoro yakatsvuka zvinhu zve graphite electrode, yakamira kudonha uye kugadzikana. Izvo zvakashata zvinokanganisa pane yakatsvuka zvinhu pamusoro pe graphite electrode yakaneta, uye t ...
Indasitiri Yekukura Insights (IGI) yakaburitsa yavo nyowani graphite electrode tsvimbo yemusika mushumo yekutsvaga uye fungidziro yeindasitiri mumakore masere anotevera. Iyo kambani inofungidzira kuti panosvika 2028, kudiwa kwepasirese kuchakura neXX%, uye musika uchakura pamubatanidzwa wekuwedzera wegore wehuwandu hwe XX%. Neichi pr ...
Kunyangwe iyo graphite electrode musika yanga iri mumwedzi mitanhatu zvichikwira kutenderera, izvozvi main graphite electrode makambani achiri muchimiro chekuputsa nekuda kwekuwedzera kwezvinhu zvezvinhu zvakasvibirira. Panguva iyi, mutengo kumanikidzwa ari graphite electrode musika kwakakurumbira, uye mutengo iwe ...
China graphite electrode musika China ...